Juliette Ratsimandrava : maneho ny fihetseham-pony ireo akaiky azy | NewsMada
Juliette Ratsimandrava : maneho ny fihetseham-pony ireo akaiky azy
Riambola Mitia, filohan’ny Faribolana Sandratra, sampana Antananarivo : « Tohina tokoa ny fo, satria lasa ny andrarezin’ny teny malagasy. Tsy nisy nandaniany ny rondohany afa-tsy ny fampiroboroboana ity tenindrazantsika ity, izay tena tiany tokoa. Izy no anisan’ny angady nananana ny Rakibolana Rakipahalalana. Fony fahavelony, tsy nitsahatra namporisika ny tanora amin’ny fandalàna ny teny malagasy i Juliette Ratsimandrava. Noho izany fitiavany ny teny malagasy izany, izy no nahazoan’ny Faribolana Sandratra ny birao foibeny, etsy amin’ny Tahala Rarihasina. Amiko, raha lasa ny olomanga, tsy tokony handraraka ilo mby an-doha ny tanora. »
Mendrika Rasolomahatratra, mpanakanto, mpampianatra mively ampongamaroanaka, ao amin’ny Tahala Rarihasina, mifanakaiky amin’ny biraon’i Juliette Ratsimandrava : « Noho ny fisarahana, tsy maintsy misy ny alahelo. Olona tsotra sy azo ifampiresahana tsara, rahateo, i Juliette Ratsimandrava. Sehatra samihafa ny misy anay, saingy ny zavatra tsapako, misokatra amin’ny lafin-javakanto hafa izy, indrindra raha tsapany fa misy fikarohana izany. Nisy, ohatra, ny famelabelarana nataon’i Hemerson Andrianetrazafy, momba ny voka-pikarohany ary voalaza tao anatin’izany ny tarika Solo Miral’. Tena liana tamin’izany izy. »
Andrianasolo Hajaina, filohan’ny Havàtsa–Upem : Aminay, tena andry niankinana Rtoa Juliette Ratsimandrava. Reny azo nihantahantana. Tsy hanadinoako an-dRtoa Juliette Ratsimandrava mihitsy ilay fampirisihana sy fankaherezana isaky ny hanao hetsika na mifankahita izahay. Hoy izy : “mahay zavatra ireto tanora ireto, mampirisika anao aho tozoy, ataovy, ianareo ange no tena ianteheran’ity teny sy kolontsaina malagasy ity e !“.
Raha nanatontosa ny velakevitra fahefatra teny amin’ny akademiam-pirenena aho ny 4 avrily 2013, vao vita ny velakevitra, hoy izy: « tsy misy hevitra intsony ny tsy handraisana anao ho mpikambana ao amin’ny Akademia”. Mpahay tantara izy, inoako fa ireo tanora sy ny olona maro nifanerasera taminy, hanohy ny tantara avokoa amin’ny alalan’ny fitozoana, fianarana, fikarohana.
Harizaka Rasolo, mpamokatra, mpanatontosa fandaharana mikasika ny ankizy sy ny kolontsaina malagasy tao amin’ny RNM : Ny tontolon’ny kolontsaina no tena nifaneraserako taminy. Ao anatin’izany ny teny. Misy fahabangana lehibe ny fampiainana ny teny malagasy. Olona tony sy tia miasa mangina Rtoa Juliette Ratsimandrava. Tsy mba tia miseho fa rehefa miasa dia tena miasa tokoa. Raha mbola asa hahasoa ny teny malagasy, tsy nahalala vizana mihitsy izy fa nanao izay tratry ny heriny.
Vitsy dia vitsy ny vehivavy manana finiavana sy faharetana toa azy teo amin’ny fampivelarana ny teny malagasy. Ezaka goavana ny vitany !
Nanangona : Landy R. sy HaRy Razafindrakoto